Posted By: KongoLisolowaa: Juun 27, 2020 00: 20 No Comments
Farqiga ugu weyn ee u dhexeeya Yurub iyo Afrika ayaa ah in Afrika ay tahay mid asal ah iyada oo aan samayn dhawaaqyo fara badan iyo in Europe ay tahay burcad-badeed burcad-badeed ah oo sameeya dhawaaqyo aad u badan sida foosto madhan marka ay duusho.
Reer galbeedku waxay dadka ku qasbaan inay rumaystaan ​​in dhammaan dhinacyada adduunka ka jira ay cad yihiin:
Malaa'igtu waa Cadaan;
Waxyaabaha la soo saaray waa Caddaan;
Guurku waa Caddaan;
Runta iyo dhalashadu waa cadaan (…)
Waxa kaliya oo taban waa Madoow:
Shaydaanku waa Madoow;
Geeridu waa Madoow;
Sixirka madow waa sixir;
Beentu waa madow;
Tuugyadu waa Madoow (…)
Laakiin markii dadka madowga / Afrikaanka ahi ay bartaan dabiicadda iyo ugaarsiga xayawaanka bahallada iyo masaska, beyku waxay ku qanacsan yihiin inay indhahooda ku weynaadaan oo ay afkooda ku kala qaadaan iyagoo yaaban. Madow waxay ku nool yihiin qaab aad uga sareeya marka loo eego dadka cadaanka.
Barashada dabeecadda iyo qawaaniinteeda waa mid muhiim u ah dadka madow / Afrikaanka. Madowga / Afrikaanka ayaa kaalinta labaad ku jira cidna!
Sep30 04: 29